पेटमा बोसो बढेर दिक्क हुनुहुन्छ? आजैबाट खानुहोस् यी खानेकुरा अनि पाउनुहुनेछ भद्धा पेटबाट छुटकारा! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पेटमा बोसो बढेर दिक्क हुनुहुन्छ? आजैबाट खानुहोस् यी खानेकुरा अनि पाउनुहुनेछ भद्धा पेटबाट छुटकारा!
पेटमा बोसो बढेर दिक्क हुनुहुन्छ? आजैबाट खानुहोस् यी खानेकुरा अनि पाउनुहुनेछ भद्धा पेटबाट छुटकारा!
admin February 8, 2021 February 8, 2021 जीवनशैली, स्वास्थ्य	0
काठमाडौँ । अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, स्वास्थ्य भन्दा स्वादलाई प्रथामिकता लगाएत कारणले अहिले थुप्रै मानिसको समस्या बनेको छ पेट लाग्नु । अनावश्यक पुल्टुक्क निस्कने पेटले मानिसको शरीर भद्दा त देखिन्छ नै, विभिन्न रोगको जोखिम समेत बढाउँछ । कसरी घटाउने त पेटको बोसो । एजेन्सीहरुले पेटको बोसो घटाउन निम्न लिखित खानेकुरा खान सुझाव दिएका छन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
लसुनः लसुनलाई सर्वगुण सम्पन्न मानिन्छ । यसमा हुने प्राकृतिक एन्टी बायोटिकले मुख्य गरी सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्दछ । यसबाहेक लसुनले शरिरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्न काम गर्दछ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । परिणाम तपाईंलाई पेट लाग्नबाट जोगाउँछ र स्वस्थय राख्न मद्धत गर्छ ।
केराः फलुलमा केरालाई एकदम राम्रो मानिन्छ । यसमा भरपुर मात्रामा पोटासियम पाइन्छ । यसले फास्ट फूडको लतलाई कम गर्दछ जसले तौल कम गर्न सहयोग गर्दछ । स्याउः बोसो घटउन स्याउ निकै उपयोगी मानिन्छ । स्याउमा पोटासियम हुन्छ जसले धेरैबेरसम्म भोक लागेको महसुस हुँदैन जसले तौल कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
दालचीनीः शरिरको तौल घटाउन दालचीनी निकै उपयोगी मानिन्छ । बिहान ब्रेकफाष्ट भन्दा अधि र सुत्नुभन्दा अघि एक कप पानीमा एक चम्चा दालचीनी पाउडर मिसाएर सेवन गर्ने हो भने स्वस्थ्यका लागि एकदमै लाभदायी मानिन्छ । ग्रीन टीः सामान्यतया ग्रीन टी स्वास्थ्यका लागि एकदमै उपयोगी मानिन्छ । अध्ययन अनुसार, ग्रीन टीमा क्याटेचिन्स नामक यौगिक पाइन्छ । जुन यौगिकले शरिरमा अतिरिक्त बोसोलाई कम गर्न सहयोग गर्दछ र स्वास्थ्य राख्न मद्धत गर्छ ।
जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, स्वास्थ्य भन्दा स्वादलाई प्रथामिकता लगाएत कारणले अहिले थुप्रै मानिसको समस्या बनेको छ पेट लाग्नु । अनावश्यक पुल्टुक्क निस्कने पेटले मानिसको शरीर भद्दा त देखिन्छ नै, विभिन्न रोगको जोखिम समेत बढाउँछ । कसरी घटाउने त पेटको बोसो । एजेन्सीहरुले पेटको बोसो घटाउन निम्न लिखित खानेकुरा खान सुझाव दिएका छन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
कोरोना अन्त्यबारे WHO ले भर्खरै दियो सारा विश्वलाई खुशीको खबर !
यो भिडियो हेरेर नरुने को होला र ? किन रुदै आए यी युवा मिडियामा ? (भिडियो हेर्नुस्)
तपाई कुन बार जन्मनुभएकाे हाे? आफ्नो जन्मबार र राशिअनुसार कति धन कमाउनु हुन्छ ? जान्नुहोस